IHoroscope yeSagittarius: Imihla yeSagittarius Zodiac Ukuhambelana, Iimpawu kunye neempawu - Sagittarius
I-Sagittarius Zodiac Uphawu lwe-Sagittarius Horoscope
Ulwazi ngeSagittarius ngeenkwenkwezi x
Okona kuhambelanayo kukonke: Gemini , Aries
Amanani eThamsanqa: 3, 7, 9, 12, 21
Uluhlu lomhla: NgoNovemba 22-Disemba 21
Amandla: Isisa, imbono enqwenelekayo, uburharha obukhulu
Ubuthathaka: Izithembiso ezingaphaya kokuzifeza, ezingenamonde kakhulu, ziya kuthetha nantoni na kungakhathaliseki ukuba zingenadiploma
Sagittarius uthanda: Inkululeko, ukuhamba, ifilosofi, ukuba ngaphandle
ISagittarius ayiyithandi: Abantu ababambelele, ukunyanzeliswa, iingcamango ezingekho eludongeni, iinkcukacha
Unomdla kwaye unamandla, iSagittarius ngabahambi bezodiac. Ingqondo yabo evulekileyo nembono yentanda-bulumko ibashukumisela ukuba babhadule ehlabathini befuna intsingiselo yobomi. I-Sagittarius yi-extrovert, ehlala inethemba, igcwele umdla, kwaye ilungele utshintsho. Olu luphawu lweLanga lwabantu abahlala bexakeke ngumsebenzi wengqondo, kodwa xa befumana isiseko, babonisa amandla abo okuguqula imibono kunye neengcinga kwizenzo ezibambekayo kunye neemeko.
Njenge Aries kwaye Leo , iSagittarius yi Uphawu lomlilo , ekukhangeleni iindlela zokudala imibala yehlabathi ngemibala yazo. Ngokucacileyo malunga neenjongo zabo kunye nokunyaniseka ngokunyanzeliswa kokuziphatha, abameli bayo basoloko benyanisekile ukuya kwinqanaba elingenangqiqo, ngaphandle kokuqwalasela ubuchule kunye neemvakalelo zabanye abantu nantoni na. Kubalulekile ukuba bafunde indlela yokuvakalisa izimvo zabo ngendlela enyamezelayo neyamkelekileyo ekuhlaleni.
ISagittarius ilawulwa Jupiter , esona sijikelezi-langa sikhulu seSolar System kunye nesona sigebenga sikhulu kwi-Astrology. Umdla wabo awunamida, kwaye aba bantu banoburharha obukhulu obukhatshwa kukufuna ukwazi. Befuna inkululeko epheleleyo, umoya wabo wokuzama uwenza uwasuse kwelinye icala lehlabathi uwase kwelinye, ehlola izithethe neentanda-bulumko ezahlukahlukeneyo.
Sagittarius - uMphilisi ongaqondwayoUkukhokelwa ngama-centaurs kunye nebali likaChiron, iSagittarius ngumqondiso wokufundisa nokuphulukisa, uhlala ulungele ukuhlalisa umhlobo kunye nokunceda abanye baphilise. Lo ngumxhasi ongafane amkelwe ngokupheleleyo ngabantu abaqhelekileyo, esoloko ekhangela imigama emide apho anokufumana khona ikhaya. Iintlungu zihlala zifihlakele emva koncumo lwabo, kwaye baya kunikela ngovuyo yonke into abanayo kwabanye abantu ukuze baphile ubomi babo simahla kuyo. Ukusikelelwa zizinto ezininzi ezimangalisayo, kuhlala kubonakala ngathi kukho into engekhoyo ukwenza ubomi babo buphelele.
Ngomso Kule veki Kule nyanga
Khetha Uphawu Leo Gemini Capricorn Itaurus